ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) - 2Game
သင်စုန်းအတတ်နဲ့ wizardry ၏ Hogwarts School တွင်တက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ပြီ! ဟယ်ရီပေါ်တာသည်သူ၏ Hogwarts စာတစ်စောင်လက်ခံရရှိနှစ်ပေါင်းမှီ, Wizard ကမ်ဘာပျေါတှငျ set ဒီအားလုံးအသစ်က RPG အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုအပေါ်စတင်။
Hogwarts Castle of-မတိုင်ခင်ဘယ်တော့မှ-မြင်ကြအခန်းပေါင်း Explore နှင့်ရှေးခေတ်နက်နဲသောအရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ပါမောက္ခ Dumbledore, Snape နှင့်ထို့ထက် ပို. ထံမှအစွမ်းထက်မှော်နှင့်အသိပညာလေ့လာပါ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင် Duel နှင့်သင့် Adventures ပေါ်တွင်သင်ကူညီပေးရန်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အတူမဟာမိတ်ဖွဲ့ဖောက်လုပ်။ WBIE ရဲ့ Portkey အားကစားပြိုင်ပွဲတံဆိပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ဒီသဲမိုဘိုင်းဂိမ်း Wizard ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု All-အသစ်သောဇာတ်လမ်း၏ဗဟိုမှာသငျသညျကိုထည့်လေ့မရှိ။
သင့်ရဲ့စိတျစှမျးအားကိုစမ်းသပ်သောအခါ, သင်စုန်းသို့မဟုတ် wizard ကိုဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း တစ်ဦးကသူရဲကောင်း Gryffindor? တစ်ဦးကကောက်ကျစ် Slytherin? သင်ဆုံးဖြတ်! ပြီးနောက်အားလုံး, ဒီကသင်၏ Hogwarts ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မှော်စာလုံးပေါင်း, ဆေး & ပို
– စာလုံးပေါင်းနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ဆေး ချ. တူသောမှော်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူနှင့်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတန်းတကျရောကျပါ။
– သင် Hogwarts ၏အနှစ်တဆင့်တိုးအဖြစ်အသစ်သောစာလုံးများ, စာလုံးပေါင်း, ဆေးနှင့်တည်နေရာများကို Unlock ။
– Hogwarts မှာနက်နဲသောအရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သင့်မှော်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။
– တစ်ဦးအားလုံးအသစ်ကဇာတ်လမ်းထဲမှာမင်္ဂလာရှိ Vault နှင့်သင့်အစ်ကိုရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားရှာဖွေပါ။
– အောက်လွှတ်တော်ဖလားအနိုင်ရရန်သင့် housemates နှင့်အတူဘွန်း။
– မိတ်ဆွေများနှင့်သူချင်းကျောင်းသားများအ … သို့မဟုတ်ပျက်ယွင်းစေပြိုင်ဘက်ကိုကူညီ Quest များပေါ်သွားပါ။
– အတူတကွ adventuring နေဖြင့်လေးစားမှုရယူနိုင်သောနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်စေ။
Hogwarts နက်နဲသောအရာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဆော့ကစား, သို့သော်, သငျသညျကိုမှန်ကန်ငွေနှင့်အချို့သော In-ဂိမ်းပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နိုင်ပါတယ်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်: ဟယ်ရီပေါ်တာသတိပြုပါ။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကန့်သတ်ရန်လိုလျှင်သင့်ရဲ့ device ရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။
Hogwarts နက်နဲသောအရာ: ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းများအရ, သငျသညျဟယ်ရီပေါ်တာ play သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလည်းလိုအပ်ပါသည်။
Android အတွက် ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!